अमेरिकी प्रस्तावमा शान्तिस्थापक सेनाको बजेटमा कटौती : नेपाललाई कस्तो असर ?
HOME » अमेरिकी प्रस्तावमा शान्तिस्थापक सेनाको बजेटमा कटौती : नेपाललाई कस्तो असर ?
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ। सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ। अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो। विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ। मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ।
गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई १७ असार देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ। अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ। उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ।
लेबनान : १२ स्टाफ अधिकृत तथा फौज ८५० गरी जम्मा ८६२ जना कार्यत छन्। लेबनानमा आठजना नेपाली गैरसैनिक स्टाफ छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।